नेपाल आज | डा. केसी भन्छन्– शेरबहादुरकी स्वास्नी पनि हामीले नै वोकिदिनु पर्ने ?
समाचार अन्तरवार्ता भिडियो इतिहास र अनुभूति
आइतबार, २० भदौ २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले तत्कालिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक कुकर्म गरेको र चरित्रहिन काम गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल आजको नियमित स्तम्भ ‘इतिहाँस र अनुभुती’ मा आफना विचार राख्ने क्रममा डा. केसीले नेता नेपाल लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, पद्धती र मर्म विपरित हिडेको र लोतन्त्रमा त्यसो गर्ने छुट नभएको तर्क गरे ।
हाम्रो समाजमा ‘जो सँग मन पर्यो उहीसँग सुत्दै छोरो जन्माउँदै’ हिड्नु र लोकतन्त्रमा ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्को दलको सहयोग लिएर आफ्नो दल भाँड्नु एकै भएको उनको तर्क छ। ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेको र प्रतिगमनको वाटो समाएपछि त्यसलाई रोक्न नेता नेपालले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको भन्छनन् नी ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘तपाईले विवाह गर्नु भो, सन्तान पैदा भएन। त्यसो हो भने खेताला लगाएर पनि छोरो जन्माउन पाईन्छ त ? यो त तेस्तै हो नी। लोकतन्त्र भनेको एउटा पद्धती हो, एउटा सिद्धान्त हो। दलिय ब्यवस्थामा दल सवैभन्दा माथि हुन्छ। दलिय अनुशासन हुन्छ। जहाँ–जहाँ मन पर्यो, जे–जे मन पर्यो–भाँड्दै, जोसँग मन पर्यो उहिसँग सुत्दै छोरो जन्माउँदै हिड्न पाईन्छ ? त्यस्तै हो यो ।’ लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य एकदमै गलत हुने उनले वताए ।
नेता नेपाल ओलीसँग ५ वर्षको लागि पराजित भएको नेता हो भन्दै उनले त्यो अवधिमा उनले पार्टी भित्रै संघर्ष गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको वताए । ‘उहाँ ५ वर्षलाई ओलीसँग पराजित भएको नेता हो । माधव नेपालले त्यहीभित्र संघर्ष गरेर केपी ओलीलाई । किन भने केपी ओलीले त २०÷२५ वर्ष वहाँलाई नै मानेको छ नी त’ उनले भने–‘हिजो चै वामदेवले पार्टी विभाजन गर्दाखेरी के भन्दै हिड्नु हुन्थ्यो माधवकुमार नेपाल ? वामदेव त अझ पार्टी फुटाउनेहरुलाई जमिनमा गाड्नुपर्छ भन्दै नुनचुक लाउनु पर्छ भन्दै हिड्नु हुथ्यो। त्यसकारण यो जुन एउटा अराजक ब्यवहार यीनीहरुवाट भएको छ। पार्टीको संगठनात्मक ब्यवस्था÷दलिय ब्यवस्थाको मर्म र धर्मको प्रतिकुल, ब्यक्तिगत सत्तास्वार्थ, असहिष्णुता, इर्स्या, द्वेस। केपीले मात्रै खायो, हाम्रा मान्छेलाई भागवण्डा दिएन भन्ने वाहेक केहि पनि छैन। यसलाई प्रतिगमन भनेपनि, अग्रगमन भनेपनि।’
‘तर, ओलीका मान्छेले मात्रै लाभ लिएको त होनी ?’ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले माधवकै समस्यालाई अगाडि सार्दै त्यसको तुलनामा ओलीले केही पनि नगरेको वताए । ‘माधव नेपालका पालामा उनका मान्छेले मात्रै लाभ लिएको पनि त होनी। यो भन्दा वढ्ता थियो। कुनै पनि नियुक्तीमा, सरुवा, वढुवामा कहीँ पनि। न योग्यताका आधारमा हुन्थ्यो। न चै पार्टीका वरिय मान्छे’ उनले भने–‘अहिले नै पनि एउटा नियुक्ति गर्नु भएको छ। माधवकुमार नेपालको भागमा वागमतीको प्रदेश प्रमुख वनाउनु भयो। को हुन तिनी ? त्यसपछि गोविन्द बन्दी (शर्मा) लाई चै छ महिने मन्त्री वनाउने भन्ने छ। माधव नेपालको सम्धिको साढु भन्ने छ। यस्ता–यस्ता कुराले सरकार विस्तारमा ब्यवधान आएको भन्ने कुरा पनि छन् । आम रुपमा नेपालका दलहरु उस्तै हुन ।’
दल विभाजनका लागि ल्याईएको अध्यादेश समग्रमा हिजो पनि र आज पनि गलत भएको उनले वताए । ‘अध्यादेश आयो यसको असर कस्तो देख्नु हुन्छ ? माधव नेपालको स्ट्रेन्थ कस्तो होला ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘स्टे«न्थ एउटा भयो । तर, अर्काको दल योजनावद्ध त्यसरी फुटाउनु , संविधानलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नु यो त विरामी मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो नी । भोली अर्को दललाई फुटाउनु पर्यो, जस्तो, माधव नेपालको दललाई फुटाउनु पर्यो भने १० प्रतिशत पनि हुन्छ भनेपछि त ५० प्रतिशत त त्यहाँवाट पनि वाहिरीने भए। कुनै अर्कोलाई पनि त्यो गर्नु पर्यो भने ५ प्रतिशतले फुटाउन पाउने भन्ने भयो। केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ‘वा’ र ‘र’ मा खेल्यो भने त लोकतन्त्रको भ्रष्टिकरण हुने भयो । यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्दैन।’
आगामी निर्वाचनमा माधव नेपालको दल ले ओलीको दललाई सिद्याउन वा पराजित गराउन भन्दा पनि साईज कम गराउन काफी हुने उनले वताए । साईज कम गराउन त काफी छ। किन भने २० प्रतिशत गयो भने पनि धेरै गयो । अधिकांश ठाउँमा हिजो कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो। नाम मात्रको पराजित भए पनि प्रकारान्तरले त पराजितै भयो। समानुपातिकमा त कांग्रेसको पनि साविककै मत छ। तर, सानो संख्या भएपछि पराजित त भयो । यो रुपमा त असर पर्ने पक्का जस्तै छ, तर समग्रमा जनताले यस्लाई कसरी हेरेका छन त्यो भन्न सकिदैन । जस्तो वामदेवले यहि हर्कत गरेका थिए । त्यसले सामान्य असर गरे पनि तात्विक असर त केहि पनि भएन। सरकार वनाउन नसकेपनि त्यो वेलाको एमाले ६९ सिटमा त विजयी भयो। ६९ भनेको उसको ०४७÷४८ सालको क्यापिसिटी हो । भनेपछि तेत्रो केहि पनि फरक परेनछनी त।
वामदेवको तुलनामा प्रधानमन्त्री भई सकेका नेपालले पार्टी फुटाउनुमा फरक पर्ला नी भन्ने जिज्ञासमा उनले भने–‘नेपालमा प्रधानमन्त्री त जो पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री भएकै आधारमा तलमाथी भन्ने कुरै छैन नेपालमा’ उनले भने–‘हिजोको अवस्थामा हुन्थ्यो भने कांग्रेसलाई चैसाह्रै ठुलो फाईदा हुन्थ्यो। किन भने यीनीहरुले वैमानी गरेका हुनाले यीनीहरु दण्डनीय छन्, दण्डित गर्नुपर्छ (भन्ने थियो’। म आफै नेपाली कांग्रसको पक्षमा अभियान गर्न हिड्छु भन्या थेँ, हिजो चै । अव अहिले त नेपाली कांग्रेस त उही ड्याङको मुला भयो । फलस्वरुप केपीको नैतिक समर्थन वढेर जान्छ भनेको छु मैले। अव जनता जनार्दन हुन्छन् उनीहरुले यस्लाई कसरी सोचेको छ, कसरी हेरेको छ, के गर्छन अहिले आंकलन गर्न सकिदैन।’
निर्वाचनमा एमाले कुन पोजिसनमा रहन्छ भनेर पनि आँकलन गर्न नसकिने उनको भनाई छ। ‘अहिले केहि पनि भन्न सकिदैन। किन भने यो चिजलाई÷माधव नेपालको भुमिकालाई कसरी हेरेका छन्, जनताले’ उनले थपे–‘उनले त सुर्यको मतलाई लगेर रुखमा विछ्याईदिएका छन् ।’
हितप्रसाद न्यौपानेको आदेश विना सरकार विस्तार हुँदैन
डा. केसीले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा ज्योतिषीको मादेश विना एक पाईला पनि चाल्न नसक्ने भएकाले भदौ २३ भन्दा अगाडि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने दावी गरे । ‘ ज्योतिषीवादी हुन– शेरवहादुर। ज्योतिषि हितप्रसाद न्यौपानेले २२ गतेभन्दा यता नगर्नु भएको छ। २३ गते हुन्छ’ उनले अगाडि थपे–‘ज्योतिषीवादी हुननी शेरवहादुर त। ७ चोटी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हजुर भनेको छ ज्योतिषीले। ७ चोटी हुने हो भने २२ गते अगाडि नगर्नु है हजुर भनेको छ। त्यत्ति हो कुरा। केहि अर्को हो भने भन्नु पर्यो नी । वहाँहरुले त्यसलाई अग्रगमन भन्नु भएको छ। अग्रगमनमा यस्तै हुन्छ।’
‘त्यसो हो भने नेपालको राज्यसत्ता अव ज्योतिषको आधारमा चल्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा उनले राज्य सत्ता नभएर सरकार चै ज्योतिषीको आधारमा चल्ने वताए । ‘राज्यसत्ता होईन, सरकार चै। राज्य सत्ता त कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका मिलेपपछि मात्र हुन्छ’ उनले भने–‘प्रहरीको आईजी र मुख्यसचिवसम्म यिनीहरुले खेलखाल गर्छन होला। अन्त ज्योतिषीको चल्दैन।’
प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेको विषय विशुद्ध पैसासँग सम्वन्धित भएको उनको भनाई छ। ‘नेपाली कांग्रेसको फाईनान्सर हुन–तिनी। त्यसको पुरस्कार उमेश श्रेष्ठलार्य दिईयो’ यसअघिको प्रकरणसँग तुलना गर्दै उनले भने–‘हिजो ओलीले मोतिलाल दुगडलाई यस्तै गर्थे, आज उमेश श्रेष्ठ आए केहि फरक छैन। पात्र मात्रै फरक, प्रवृत्ति केहि फरक छैन ।’
शेरवहादुरकी स्वास्नी पनि हामीले नै वोकिदिनु पर्ने ? दास हौ हामी यीनीहरुको ?
सरकार र राज्यका निकायमा प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीहरुको हस्तक्षेप अचाक्लि वढेकोमा उनले असन्तुष्टी जनाए । ‘आरजु देउवाको भुमिकालार्य कसरी लिनु भएको छ–सरकार सञ्चालनमा ? अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँले भ्रष्टाचारको कुरा, लण्डनमा पुगेर पैसा वुझाउनेदेखि लिएर अनेक कुराहरु खुलासा गर्नु भएको थियो। उहाँको चरित्रको वारेमा पनि भन्दिनुन’ भन्दा केसीले अरुको चरित्रको कुरा गर्नु अनाधिकृत हुने वताए । ‘चरित्रको वारेमा हामीले भन्नु राम्रो हुँदैन। तर, नेपाली शासकहरु पारदर्शी छैनन। सवै कुरा मोलतोल र लेनदेनका आधारमा धन्दा गर्छन भन्ने छ। श्रीमतीहरुको हालीमुहाली चल्छ भन्ने आमधारण छ’ उनले भने–‘कुनै पनि श्रीमती, एउटी श्रीमती मात्र होईन। मन्त्री भए मन्त्राणी र प्रधानमन्त्री भए प्रधानमन्त्राणी।’
शेरवहादुर देउवालाई ब्यवस्थित वनाउन आरजुको भुमिका अपरिहार्य छ भन्ने सुनिएपछि त्यो समस्या जनताको नभएको उनले वताए । ‘त्यो हाम्रो समस्या होईन, त्यो वहाँहरुको समस्या हो । वहाँहरुलाई त हामीले सचिवालय दिएको छ। वहाँहरुका दशैं जना सल्लाहकार हुन्छन्, दशौं जना पिए हुन्छन्’ उनले थपे–‘अनि त्यसमा स्वास्नी पनि हामीले नै वोकिदिनु पर्ने ? दास हौ हामी यनीनहरुको ? त्यो हामीवाट सम्भव हुँदैन। हामीले सकेको गरिराखेका छौ । मरिमरी कर तिर्छौ, कुटोकोदालो गर्छौ। श्रमिक वजारमा मरेर आउँछौं । रेमिट्यान्स पठाउँछौं । हामीले त गरिरखको छनी।’
एमसीसीमा आम सहमति हुन्छ
डा. केसीले एमसीसीमा दलहरुका विचमा आम सहमति हुने दावी गरेका छन् । ‘एमसीसीको कारणले देउवा र ओलीको गठवन्धन वन्ने सम्भावना छ की छैन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘यीनीहरु स्वार्थान्धतामा चल्ने तत्व भएकाले सवै संभावना ओपन छन् । सामान्यतयार सरकार र प्रतिपक्षको विचमा सहकार्य हुँदैन। तर, यहाँ त त्यो लक्ष्मण रेखा पनि छेन। एमसीसीमा त आम सहमति हुन्छ। किन भने ६ वटा सरकार यसमा सहभागि छन् र सवै दलहरु संलग्न छन् । एमसीसीलाई लिएर देउवा र ओली भन्ने कुरा छैन। एमसीसी गरेको छ प्रचण्डले उनी सरकारमै छन् ।’
प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको सम्झौता भएको वताएका उनले अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भएकाले उनको सहमति विना त्यसो भएको होला भनेर कल्पना गर्न नसकिने जिकिर गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीसँग नेपाल आजका लागि प्रस्तोता माधव गुराईले गरेको कुराकानी हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।